Darawal Gaari oo lagu dilay Magaalada Muqdisho - Awdinle Online
Home News Darawal Gaari oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Darawal Gaari oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Darawalka Gaari oo lagu Magacaabi jiray Cismaan Nuur Geedi ayaa waxaa lagu dilay agagaarka Isgoyska Carwo Itko ee Degmada Wartanabadda Gobollan Banaadir.
Rag hubeysan ayaa waxaa la sheegay in Darawalla Gaari ay Xabad uga dhex bixiyeen Muraayadda Gaari nooca raaxada ah oo uu watay, iyaga oo goobta ka baxsaday.
Weli lama helin dadka ka dambeeyay dilkaas, hayeeshee wararka qaar oo soo baxayay ayaa waxaa ay sheegayeen in dilka Darawalka Gaari uu ka dambeeyay Askari ka tirsan Ciidamada Dowladda Soomaaliya.
Qof kamid ah dadka Xaafada Carwa Itko oo dhacdadaas kusoo baxay ayaa sheegay in Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ay yimaadeen halka dilka uu ka dhacay, iyaga oo sameeyay howlgal, sidoo kalena Goobta ka qaaday meydka Marxuumka.
Magaalada Muqdisho ayaa waxaa si joogto ah uga dhaca dilalka qorsheysan oo loo geysanayo, mas’uuliyiin ka tirsan dowladda, Askar iyo dad Shacab ah intaba, waxaana mas’uuliyadda dilalkaas inta badan sheegta Ururka Al-Shabaab.
Next articleMaxay ka wada hadleen Wasiir Beyle & Xubno ka tirsan Bangiga Horumarinta Afrika?